Fosslundveien 33 - I-Airbnb
Indlu evalelwe ngokupheleleyo enendawo yabaninzi (iibhedi ezisi-7). Ikhitshi inesitovu, umatshini wokuhlamba izitya, imicrowave kunye nekhabhathi yecombi (ifriji / ifriji). Igumbi lokuhlamba impahla linomatshini wokuhlamba.
Indawo enelanga, kunye nendawo entle yokukhwela intaba enamathuba okuzingela kunye nokuloba kule ndawo. Ifakwe kufutshane ne-Ånderdalen National Park, kwaye zininzi iindlela zokuhamba intaba kunye neendawo zokugcina indalo ezininzi ezikufutshane.
Jonga ngemizekelo yezinto ezinomtsalane.
Igrosari ekufutshane yi-18/15/25 km (kwiindlela ezahlukeneyo).
Kuya kufuneka uqhube iikhilomitha ezingama-30 ukusuka eFinnsnes, emazantsi eSenja. Landela imiqondiso eya eSkrolsvik.
Indlu ifumaneka kwidolophana encinci kunye nabahlali abasisigxina abangama-50 ukongeza kwiindlwana ezininzi kunye nezindlu zeeholide. Indawo ezolileyo ngomasipala kunye nendlela enezithuthi eziphantsi, iimitha ezingama-300 ukusuka kwindlela yesithili engama-860. Yi-30 km (malunga nama-25 min.) Ukuya eFinnsnes eyidolophu ekufutshane.
Ndifumaneka ngefowuni okanye nge-sms (iselula: +47 90098575) ngemibuzo malunga nekhaya okanye iihambo, uhambo kunye nezinto ezinomtsalane ezijikeleze iSenja kunye neMid-Troms. Ndingafumaneka ngomyalezo nge-app ka-Airbnb.
Ndiyafumaneka ngefowuni okanye ngetekisi
ukuba unemibuzo malunga nendlu, iihambo okanye ezinye izinto ezinomtsalane eSenja. Ungandifumana ngokuthumela umyalezo nge-app ye-Airbnb.
Ndifumaneka ngefowuni okanye nge-sms (iselula: +47 90098575) ngemibuzo malunga nekhaya okanye iihambo, uhambo kunye nezinto ezinomtsalane ezijikeleze iSenja kunye neMid-Troms. Ndin…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Tranøybotn